Circuit Breaker, Iftiinka Iftiinka Gudaha, Mitaarka Watt Smart - Hawai
Qalabka Kumbiyuutarka Haydarooliga
MCB Iyadoo Padlock
Qalabka Wareejinta Qalabka Wareegtada ah
Wareegga Wareegga Wareegga Buluugga
M Wareegtada Wareegga Wareegga
Taxanaha Cagaarka Wareega Wareega
Qaybaha Jabinta Wareegga
Khadka otomaatiga ah
Akhriska casriga ah
Microcomputer Gargaare Caqli leh
WiFi furaha smart & godka
Beddel & Socket
Xakamaynta iyo Badbaadinta Beddelka
Bedelka Wareejinta otomaatiga ah
Joojiyeyaasha Ciladaha Ciladda (GFCI)
Qalabka Fiilooyinka Korantada
La xiriir & Relay & Bilowga
Daboolka Balaastikada Birta
Danab Sare Gudaha
Bannaanka Sare ee Danab
Saacad & Meter
Beddelka & Bixinta Biyuhu
biiro-biyuhu & godka biyuhu ka galaan
Beddelka Cimilada ee Cimilada
Qalabka Badbaadinta Badbaadada (SPD)
SF6 Wareejinta Wareegga
Golaha Epoxy Net
Sanduuqa Isku-darka PV
EX Cadayn koronto
Isku-haynta Xiisadda iyo Isku-hakinta Hakinta
Daloolida isku xira isku xira
Taxanaha Wadajirka Degdega ah
Wax soo saar badan
Qalabka Rakibaadda Iyo Qalabka
heerkulka & heerkulka xukuma
Birta Birta loogu talagalay Capacitor
Wax soo saarka ugu weyn
S7DC Mini Circuit jebiye
· DC 1000V 63Amp · Waxay ku habboon tahay Ilaalinta wareegga wareegga wareegga iyo wareegga gaaban · wuxuu u hoggaansamayaa IEC898 iyo GB10963 Standard
Dhamaan shaqaalaheena QC ayaa mas'uul ka ah waxqabadka
Kormeerka tayada adag ee hoos yimaada ISO 9001: 2000
10KA 6KA jumlada iec shahaado mcb Mini Circu ...
Taxane jumlada C7S AC contactor 9-95A conta ...
Daad YKMF taxane 20A 24A 40A 63A qaybsan C ...
Daad 0 ~ 999999. 9kwh 1.5 (6) A 5 (20) A 10 (40) ...
500V 690V Jumlada Jumladaha Fiyuuska Cylindrical
YUANKY ILAA 1989
Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd. sidoo kale loo yaqaan YUANKY waxaa la bilaabay 1989. YUANKY waxay leedahay in ka badan 1000 shaqaale, oo daboolaya aag ka badan 65000 mitir murabac. Waxaan leenahay khadad wax soo saar oo casri ah iyo qalab kontorool sare leh oo leh maamulka sayniska, injineero xirfadlayaal ah, farsamo yaqaanno tababaran iyo shaqaale xirfad leh. YUANKY wuxuu isku darayaa R & D, wax soo saarka, iibinta, iyo adeegga si loo sameeyo xal elektaroonik ah iyo koronto oo dhameystiran ..
Eaton's smart power breaker circuit breaker wuxuu ku darayaa shaqeynta macaamiisha C&I
Nofeembar / 09/2020
Eaton mashiinka wareegga wareegga (sidoo kale loo yaqaan maaraynta maaraynta tamarta wareejinta) ee loogu talagalay dadka isticmaala guryaha ayaa si muuqata loogu soo bandhigay Bandhigga Tamarta Cadceedda ee Sannadkan. Sonnen wuxuu soo bandhigay Eaton's mashiinka wareegga wareegga iyada oo loo marayo rakibidda firfircoon. Aaladda ayaa muujisay awoodda ec ...
Dabaylahaas raadaarka ku hoos jira waxay kordhin doonaan tirakoobka UPS
Nofeembar / 07/2020
Motley Fool waxaa la aasaasay 1993 waxaana walaalo ahaa Tom iyo David Gardner. Iyadoo loo marayo boggeena internetka, Podcasts, buugaagta, tiirarka wargeysyada, barnaamijyada raadiyaha iyo adeegyada maalgashiga ee horumarsan, waxaan ka caawinnaa malaayiin dad ah inay gaaraan xorriyadda maaliyadeed. Adeegga 'United Parcel Service' (NYSE: UPS) wuxuu lahaa rubuc kale oo wanaagsan, ...
Waqtigan xaadirka ah, batteriga lithium-ka tamarta iyo batteriga kaydinta tamarta lithium ayaa si weyn loogu qiimeeyaa warshadaha.
Sebt / 28/2020
Waqtigan xaadirka ah, codsiga farsamada ee batteriga lithium ee keydinta tamarta wuxuu inta badan diiradda saaraa dhinacyada saldhigga shabakadda saldhigga korontada heeganka, nidaamka keydinta indhaha, gawaarida korantada iyo saldhigyada lacag bixinta, qalabka korontada, qalabka xafiiska guriga iyo meelaha kale. Intii lagu guda jiray 13-kii Shanta ...
hal-abuurnimo wadajir ah iyo awoodsiinta tikniyoolajiyadda dijitaalka ah
Sebt / 27/2020
Waqtigan xaadirka ah, isbeddelka dhijitaalka ah wuxuu noqday is afgarad buuxa ee shirkadaha, laakiin wuxuu wajahayaa tiknoolajiyada casriga ah ee aan dhammaadka lahayn, sida looga dhigo teknolojiyadda inay ka ciyaarto faa'iidada ugu badan goobta ganacsiga ee shirkaddu waa xujada iyo caqabadda soo food saartay shirkado badan. Marka la eego, inta lagu gudajiray ...
Warka CCTV wuxuu ku taxay lacagta lagu shubo oo ah mid ka mid ah toddobada goobood ee waaweyn ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.
Sebt / 25/2020
Abstract: Febraayo 28, 2020, maqaalka "waa waqtigii la bilaabi lahaa wareeg cusub oo dhismaha kaabeyaasha ah" ayaa la sii daayay, taas oo dhalisay dareen ballaaran iyo Dood ku saabsan "kaabayaasha cusub" ee suuqa. Ka dib, warka CCTV wuxuu ku taxay qaddarka lacag-bixinta sida ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2020: Taageero farsamo: